အာကာသ၌ အသက်ကယ်ကြိုး မပါဘဲ ပထမဆုံး ပျံသန်းခဲ့သူ အသက်(၈ဝ)တွင် ကွယ်လွန် - Yangon Media Group
အာကာသ၌ အသက်ကယ်ကြိုး မပါဘဲ ပထမဆုံး ပျံသန်းခဲ့သူ အသက်(၈ဝ)တွင် ကွယ်လွန်
ဟူစတန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၃
အာကာသထဲတွင် အသက် ကယ်ကြိုးမပါဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပထမဆုံးပျံသန်းခဲ့သော အမေရိကန်နာဆာသူရဲကောင်း မက်ကန်းဒလစ်သည် အသက်(၈ဝ) အရွယ်၌ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ် ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် AP သတင်းကဆိုသည်။ မက်ကန်းဒလစ်သည် ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် အာကာသလွန်းပျံယာဉ် Challenger နှင့် ကြိုးမချည်ဘဲ Jetpack ကိရိယာသုံးကာ အာကာသထဲတွင် ပျံသန်းပြခဲ့သည်။ အပြာ ရောင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကြီး၏အပေါ် မည်းနက်နေသောအာကာသထဲတွင် ပျံသန်းနေသည့် ၎င်း၏ဓာတ်ပုံသည် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါဓာတ်ပုံသည် အမေ ရိကန်နိုင်ငံသားများကို စိတ်အားတက်ကြွစေခဲ့ကြောင်း၊ လူသားတို့ မလုပ်နိုင်သောအရာမရှိဟူသည့် ယုံကြည်ချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ ကြောင်း အမေရိကန်ရေတပ် အကယ်ဒမီတွင် မက်ကန်းဒလစ်နှင့် သင်တန်းဖော်ဖြစ်ခဲ့သော အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်းက ကြေညာချက်ထုတ် ပြန်ကာ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသည်။ အာကာသထဲတွင် အသက် ကယ်ကြိုးမပါဘဲ ပထမဆုံးအကြိမ် ပျံသန်းခဲ့ရာတွင် ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်မှုမရှိခဲ့ကြောင်း၊ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ လေ့ကျင့်ထားသောကြောင့် ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိခဲ့ကြောင်း မက်ကန်းဒလစ်က ပြောခဲ့ဖူးသည်။
”အာကာသဆိုတာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ လေဟာနယ်ကြီးလို့ ကျွန်တော့်ကိုပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေဒီယိုလိုင်းသုံးခုကနေ ”အောက်ဆီဂျင်ကျန်သေးလား”၊ ”အင်ဂျင်တွေနဲ့ ဝေးဝေးနေ”၊ ”ငါ့အလှည့်ဘယ်တော့လဲ”ဆိုပြီးလှမ်း မေးနေကြတော့ သိပ်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး”ဟု မက်ကန်းဒလစ်က ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ဖွင့်ဟရေးသားခဲ့ဖူးသည်။ ၎င်းသည် ရေတပ်အကယ် ဒမီမှဘွဲ့ရခဲ့သလို လျှပ်စစ်အင်ဂျင် နီယာနှင့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဘာ သာရပ်များတွင်လည်း မဟာဘွဲ့ ရရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။
မြောက်ကိုရီးယားသို့ ရေနံတင်ပို့မှု တားမြစ်သည့် ဆန်ရှင်အသစ်ကို လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် ကန့်က?
ရေရှည်တည်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချ NCA လမ်းကြောင်းမှ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုသစ်က?
ရွှေဘောလုံးဆုတွင် ပြင်သစ်သားများ ချန်လှပ်ခံရခြင်းကို ဒက်ချမ့် စိတ်ပျက်၊ ယမန်နှစ် အောင်မြင်